သက်ဝေ: ဟင်းချက်သောနေ့ (၁)
ရှလွတ် to ဓာတ်ပုံ ကြည့်ခွင့်ရသော ပုံများ
ဓာတ်ပုံ ကြည့်ခွင့် မရသော ပုံ ၂ ပုံအား မှတ်ချက်ပေးရန် ဒေါက်တာကိုကြီးအား မေးလိုက်ဦးမည်....:P
Hmoo September 15, 2012 at 3:26 PM
ဖြူ September 15, 2012 at 3:47 PM
ဟင်းချက်ပြီး ထမင်းမချက်တဲ့ အိမ်ရှင်မလေးပေါ့...း))
မိုးငွေ့........ September 15, 2012 at 4:06 PM
ချစ်စရာလေးတွေ...ဟင်းကိုပဲ မဲချက်နေတဲ့ အိမ်ရှင်မနဲ့ မချက်ရသေးသောထမင်းကိုခူးဖို့ ပန်းကန်ကိုင်ထားတဲ့ အိမ်ရှင်ထီးကိုပြောတာ...။ အမ သရက်သီးကြော်က သရေကျစရာလေးပါ..။ အချိုမှုန့်လျှော့စားနော် ကျန်းမာရေးထိခိုက်တယ် (ဆရာဝင်လုပ်သွားသည်)...း)
ထမင်း ထမင်း ပာားပာား
မေဓာဝီ September 15, 2012 at 8:41 PM
နောက်ဆုံးပုံကို မကြည့်ရ၍ အလွန်ဝမ်းနည်းမိပါသည်။
sosegado September 15, 2012 at 11:58 PM
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်စရာကောင်းပြီး စားလို့ကောင်းမှာပါ၊
Khaing Thazin September 16, 2012 at 11:56 AM
စားမယ်ဆိုမှ ထမင်းမချက်ရသေးတာမျိုး ကြုံရတိုင်း သိပ်စိတ်ညစ်ရတယ် ... ဒန် ဟန် ဟန် ...း))
ဝက်သားဟင်းထဲကို အရောင်တင်မှုန်. ထည်.ရသေးလားဟင် အရောင်လှတယ်နော်
Yan September 16, 2012 at 1:05 PM
pandora September 16, 2012 at 1:08 PM
အခုအချိန်မှာ အဲဒီဟင်းတွေကို မကြည့်နိုင်ဘူး.. ခံစားရတယ် :((
Thandar Lwin September 16, 2012 at 1:48 PM
စားချင့် စဖွယ် ချက်...
သရက်သီးချက် စားချင်သည် ..ရှလွတ်
ဇွန်မိုးစက် September 16, 2012 at 8:55 PM
အဟား... သိပြီ။ ဟင်းချက်သောနေ့ဆိုတာ ထမင်းမချက်မိသောနေ့လို့ အဓိပ္ပာယ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း :P
မြသွေးနီ September 17, 2012 at 11:18 AM
ညစ်ပတ်ပေသလူးနေတဲ့ အိမ်ရှင်မပုံကို ဈေးကောင်းပေးဝယ်ချင်ပါသည်...:)
ထမင်းအိုးလည်း ကျက်ရော... ဟင်းတွေ ကျန်မှ ကျန်ပါတော့မလားလို့..။
Thazin September 17, 2012 at 9:23 PM
Nyi Linn Thit September 18, 2012 at 6:27 AM
ဟား..ဟား.. သဘောတကျနဲ့ ရီသွားတယ် မသက်ဝေ၊း) ဒီလိုမျိုး စားရိုးစားစဉ် မဟုတ်တဲ့ ဟင်းတွေ ချက်ထားတာနဲ့တင် ထမင်းချက်ဖို့ မေ့သွားတဲ့ အဖြစ်က ချေပလိုက်လို့ ရမှာပါ..၊
'ချက်သူနှင့် သူ၏အိုးခွက်များ' ကို မှတ်တမ်းတင်ထား တာလည်း မိုက်တယ်ဗျ၊ ဆင်ဆာ မရှိတော့တဲ့ တချိန်မှာ အဲဒီပုံတွေ ကြည့်လို့ ရချင်ရနေမှာ...။း)
sonata-cantata September 19, 2012 at 9:07 PM
ဟင်...သရက်သီးကို ဒါးနဲ့ ပေါက်ရမယ်
ညီမလည်း ဟင်းတွေချက်ပြီး ထမင်းခူးမယ်ကြံမှ ထမင်းမချက်ရသေးတာ ခဏခဏပဲ ....၊ ခုမှ အဖော်တွေ့လို့ ဝမ်းသာသွားတယ်...။ ဟီးးး
အိမ်မှာ အချိုမှုန့်ကို ခိုးမထည့်ရဘူး.. ။
"ငါတို့ ငယ်ငယ်တည်းက အချိုမှုန့်ဟင်းတွေနဲ့ စားပြီးကြီးလာတာ အခုမှ ဘာ ကျန်းမာရေးလဲ.. ထည့်သာထည့်.. ချကွ" နဲ့ ဘေးက မြှောက်ပင့်ပေးနေတာလေ... :D
ပျိုးယုဝသုန် September 22, 2012 at 6:35 PM
စားချင်လိုက်တာ အစ်မရေ.. ဒီမှာက ဝက်အူချို ဝယ်လို့မရဘူး ..
တန်ခူး September 23, 2012 at 12:27 AM
ကိုကြီးရေ. အချိုမှုန့် တွေ သုံးနေတယ်ဗျို့့ နှုတ်ပိတ်ခ သရက်သီးကျော်ကြွေးပါ. မကြွေးလျှင် အော်တိုင်မည်
ဖိုးတုတ် September 24, 2012 at 11:56 AM
မသက်ဝေကြီးက အချက်အပြုတ်လည်း ရတယ်၊ အလှူလုပ်ပြီး ဖိတ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ၊